–मेयरमा चित्रबहादुर कार्की र उपमेयरमा बिना राना विजयी
–११ वडा मध्ये ९ वडामा एमालेको प्यानल, २ मा कांग्रेस, माओवादी निल
सैनामैना, असार १९ । बुटवल पश्चिमको सम्भावना बोकेको नगरका रुपमा रहेको सैनामैना नगरपालिकामा नेकपा एमालेको शानदार जीत भएको छ । ११ वटा वडा रहेको सैनामैनामा मेयर, उपमेयरसहित ९ वडामा प्यानलसहित एमालेको विजय भएको छ ।
मेयरमा एमालेका उम्मेदवार चित्रबहादुर कार्कीले १३ हजार ३० मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनका प्रतिष्पर्धी नेपाली कांग्रेसका फणेन्द्रप्रसाद शर्माले १० हजार ३ सय ५ मत प्राप्त गरे । यसैगरी उपमेयरमा एमालेकी उम्मेदवार विना रानाले १२ हजार ९ सय ६१ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी छन् । उनकी प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी लक्ष्मी चौधरीले ९ हजार ७ सय ९ मत प्राप्त गरिन् ।
सैनामैनामा माओवादी भने निल भएको छ । माओवादी केन्द्रको कुनै पनि वडामा एउटा सदस्य पनि जित्न सकेन् । माओवादीबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका चेतनारायण न्यौपानेले दुई हजार चार सय १७ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै उपमेयरकी माओवादी उम्मेदवार दिपीका शर्माले दुई हजार तीन सय ५७ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत नुमराज खनालले जानकारी दिएका छन् ।
वडा नं. १ मा कांग्रेसले ६ सय ९१ मत, एमालेले १ हजार ५ सय ६ मत र माओवादी केन्द्रले ९ सय ६१ मत प्राप्त गरे । त्यहाँ एमालेका केहरसिंह गलामीसहित प्यानल निर्वाचित भए । महिला सदस्य सुनिता के.सी, दलित महिला सदस्य शोभा बि.क. सदस्यहरु रामबहादुर विक र धर्मेन्द्र चौधरीको प्यानल विजयी भए ।
यस्तै वडा नं. २ मा कांग्रेसले ६ सय ४१, एमालेले ७ सय ९१ मत र मा.केले १ सय २९ मत प्राप्त गरे । यहाँ वडा अध्यक्षमा एमालेका कामदेव भुषाल सहित महिला सदस्य सुजनी थारु, दलित महिला सदस्य निना देवी सुनार, सदस्यहरु कुलबहादुर बि.क र थानेश्वर गिरीसहित प्यानल निर्वाचित भएका छन् ।
वडा नं. ३ मा कांग्रेसको ६ सय मत आउँदा एमालेको १ हजार २ सय ५० मत आयो । यहाँ माओवादी केन्द्रको ५१ मत मात्रै आयो । यहाँ वडा अध्यक्षमा एमालेका रत्नबहादुर पौडेलसहित महिला सदस्य सबिता भुषाल भण्डारी, दलित महिला सदस्य पुनसरा सेती, सदस्यहरु भिम बहादुर खड्का र सुनबहादुर पुुनको एमाले प्यानल विजयी भएको छ ।
वडा नं. ४ मा भने कांग्रेसका धनबहादुर कार्कीको प्यानल विजयी भयो । उनले १ हजार ४ सय ४२ मत पाउँदा एमालेले १ हजार १ सय ७३ मत प्राप्त गरे । त्यहाँ कांग्रेसबाट महिल सदस्यमा अमृता देवि गौतम, दलित महिला सदस्यमा निशा परियार, धनकुमारी राना र दानबहादुर थारु निर्वाचित भए । यो वडा मेयरका कांग्रेसका उम्मेदवार फडेन्द्र शर्मा र आफन्तहरु भएको वडा हो । यहाँ माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्षका उम्मेदवारले ५ सय १५ मत पाए ।
यस्तै वडा नं. ५ मा कांग्रेसले ८ सय ५७ मत पाउँदा एमालेले १ हजार ३ सय ३६ मतका साथ बिजयी भयो । यहाँ माओवादी केन्द्रले जम्मा ४ सय १३ मत ल्यायो । एमालेका फर्सराम सापकोटा वडा अध्यक्षमा र महिला सदस्य मनकुमारी राई, दलित महिला सदस्य मिरा बि.क. गोैतम, सदस्यहरु रामनारायण थारु र रामबहादुर बि.कको एमालेको प्यानल विजयी भए ।
वडा नं. ६ मा कांग्रेसले ९ सय ४० मत पाउँदा एमाले १ हजार ५ सय ९१ मतका साथ विजयी भयो । यहाँ मा.के. २ सय ८ मत पाए । वडा अध्यक्षमा एमालेका वसन्त पाण्डेयसहित महिला सदस्य लक्ष्मी पौडेल, दलित महिला सदस्य मायादेवी बि.क., सदस्यहरु रेनुकान्त गौतम र नेत्र बमरेल निर्वाचित भए ।
वडा नं.७ मा कांग्रेसले ७ सय ४ मत पाउँदा एमालेले ८ सय २५ मतका साथ विजयी भएको छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रले जम्मा ३ सय १५ प्राप्त गरेको छ । यहाँ वडा अध्यक्षमा एमालेका डिल्लिराम बेल्बासे सहित महिला सदस्य देवी कार्की, दलित महिला सदस्य मनरुपा चौधरी, सदस्यहरु दिल बहादुर थापा र हरीराम चौधरीको प्यानल विजयी भयो ।
वडा नं. ८ मा कांग्रेसले ५ सय ५५ पाउँदा एमालेले ९ सय ४४ मतका साथ विजयी भयो । यहाँ मा.केले १ सय ४० मत मात्रै पायो । वडा अध्यक्षमा एमालेका रामशरण न्यौपाने सहित महिला सदस्य पार्वती श्रेष्ठ, दलित महिला सदस्य इमा सुनार सदस्यहरु देव नारायण ढकाल र ईश्वरी भण्डारीको प्यानल नै विजयी भए ।
यस्तै वडा नं. ९ मा कांग्रेसले ४ सय १० मत पाउँदा एमालेले एमालेले ७ सय ५३ मतका साथ विजयी भयो । यहाँ मा.केले जम्मा ३ सय ३६ मत प्राप्त गरेको थियो । यहाँ वडा अध्यक्षमा एमालेका डोलनाथ भण्डारीसहित महिला सदस्य सिता पौड्याल, दलित महिला सदस्य बन्दना बि.क सदस्यहरु खेमबहादुर मगर र कमला चौधरीको प्यानल विजयी भयो ।
यस्तै वडा नं. १० मा कांग्रेसले १ हजार १ सय २१ मत प्राप्त गर्दा एमालेले १ हजार ४ सय ४८ मतका साथ विजयी भयो । यहाँ मा.केले मात्रै ५१ मत प्राप्त ग¥यो । यहाँ वडा अध्यक्षमा एमालेका लोकनारायण थापा प्यानलसहित विजयी भए । यस वडामा महिला सदस्य कल्पना कुँवर, दलित महिला सदस्य पार्वती बि.क.,सदस्यहरु चन्द्रबहादुर थापा र हरीबहादुर सार्की रहेका छन् ।
सैनामैनाको वडा नं. ११ मा भने वडा अध्यक्षमा कांग्रेसका सुनिल मरासिनी विजयी भए । उनले एमालेका टेकनारायण रेग्मीलाई झिनो मतले पराजित गरे । मरासिनीले १ हजार २ सय २६ मत पाउँदा एमालेका रेग्मीले १ हजा १ सय ९४ मत प्राप्त गरे । यहाँ वडाका सबै सदस्यहरुमा भने एमालेले जितेको छ । सदस्यहरुमा महिला सदस्य फुलमती थारु, दलित महिला सदस्य कमला दमै, सदस्यहरु रामप्रसाद अर्याल र रामप्रसाद भुषाल निर्वाचित भए ।